အမြိုးသမီးမြားအတှကျ သားသမီးလှယျကူစှာ ရနိုငျရနျ နညျးလမျးမြား | OnDoctor
အမြိုးသမီးမြားအတှကျ သားသမီးလှယျကူစှာ ရနိုငျရနျ နညျးလမျးမြား
By OnDoctor Editor	 On Jul 19, 2018
အမျိုးသမီးများအတွက် သားသမီးလွယ်ကူစွာ ရနိုင်ရန် နည်းလမ်းများ
အိမ်ထောင်တစ်ခုတွင် သားသမီးရှိခြင်းသည်လည်း ပြည့်စုံခြင်းတစ်ခုပါ။ သားသမီးရလွယ်သော အိမ်ထောင်ရှင်များ ရှိသကဲ့သို့ သားသမီးရဖို့ အမျိုးသားဘက်ကော အမျိုးသမီးဘက်ကပါ ကြိုးစားနေရတဲ့အနေအထားလေးတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအတွက် သဘာဝအတိုင်း သားသမီးရစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းလေးများကို ပြောပြပေးလိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ရာသီစက်ဝန်းကို သေချာမှတ်ထားခြင်း၊ နည်းလမ်းမှန်ဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အတူတူနေခြင်း စသည့်နည်းလမ်းများကို သေချာနားလည်ထားပါက သားသမီးလွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေဖြင့် အနေအထိုင် အစားအသောက်မှန်ကန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
– caffeineဓာတ်ပါဝင်သော ကော်ဖီများကို သောက်သုံးခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။ တစ်နေ့ကို caffeineဓာတ် 500mgထက်မပိုရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အိမ်မှာကော်ဖီကို ကိုယ်တိုင် နှပ်သောက်ပါက ၅ခွက်ထက်မပိုရပါဘူး။ ဆိုင်မှာ Latte or Americanoသောက်ပါက 16ounces(၂ခွက်)ထက်ပိုမသောက်သင့်ပါဘူး။ caffeineဓာတ်သည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ များနေပါက သန္ဓေမျိုးအောင်နိုင်ခြေနှုန်းကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
– အာဟာရပြည့်ဝသော အစားအစာများကို ရွေးချယ်စားသုံးပါ။ အစားအစာများရွေးချယ်ရာတွင် သံဓာတ်၊ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်၊ ပရိုတင်းဓာတ်စသည်တို့ပြည့်ဝစွာပါဝင်သော အစားအစာများကို ရွေးချယ်စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ၎င်းအာဟာရဓာတ်များပါဝင်သော အစားအစာများမှာ အစိမ်းရင့်ရောင်ရှိသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပဲတောင့်ရှည်နှင့် ပဲအမျိုးမျိုး၊ ပန်းမုန်လာ၊ စပျစ်သီးခြောက်စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Omega-3 ပါဝင်သော အရိုးပါဝါးစားလို့ရတဲ့ ငါးသေးသေးလေးများကို စားသုံးပေးပါ။ အကယ်၍ သင်ဟာ အသားမစားတဲ့သူဖြစ်ပါက Omega-3ကို သစ်ကြားသီး၊နှမ်းစေ့စသည့် အစေ့အဆံများမှရရှိနိုင်ပါတယ်။ အချိုဓာတ်များသော အစားအစာများ၊ ပြည့်ဝဆီပါဝင်သော အစားအစာများကို စားခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။
– ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်များနေလျှင် ကလေးရနိုင်ချေ နည်းနိုင်ပါတယ်။
– အရက်သောက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည် တစ်နေ့ကို အရက် ၂ခွက်ထက်သောက်သုံးပါက သားသမီးရနိုင်ချေ နည်းပါးနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသားများသည်လည်း အရက်အလွန်အကျွံသောက်ပါက သုတ်ကောင်အရေအတွက် လျော့နည်းစေပါတယ်။
– ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဖြင့် သားသမီးရရှိနိုင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည့်အပြင် သားအိမ်ပြင်ပ၌သန္ဓေတည်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း၊ ပေါင်မပြည့် လမစေ့သော ကလေးမွေးဖွားနိုင်ခြင်း၊ မွေးရာပါရောဂါများပါလာနိုင်ခြင်းစသည့်ဆိုးကျိုးများလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ သင်၏အမျိုးသားအပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားတွင် ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူများရှိနေပါက ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါ။ဆေးလိပ်အငွေ့ရှူသူများသည်လည်း ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူများကဲ့သို့ပင် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
– ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်အချိန်ကတည်းက အားဆေးသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ သံဓာတ်အားဆေးနှင့် ဗီတာမင်အီးကြွယ်ဝစွာပါဝင်သော အားဆေးများသည် သားသမီးရရှိရန် များစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ သို့သော် မသောက်သုံးမီဆရာဝန်နှင့် သေချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှသာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
– အိမ်ထောင်ရှင်များအနေဖြင့် သားသမီးမယူခင် နှစ်ယောက်လုံးသည် ဆရာဝန်နှင့် သေချာပြသ၍ စစ်ဆေးမှုများခံယူသင့်ပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် မည်သူ့တွင် ချို့ယွင်းချက် ရှိမရှိကို သေချာစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်လိုအပ်သော ဆေးဝါးများကိုလည်း ဆရာဝန်များက ညွှန်ကြားပေးပါလိမ့်မယ်။
– အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးများသည် ကလေးယူဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါက လက်ရှိသုံးစွဲနေသော သန္ဓေတားဆေးများကို ဖြတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သန္ဓေတားသောက်ဆေး၊ ထိုးဆေးအစရှိသည်တို့သည် သင့်ရဲ့ ရာသီစက်ဝန်းကို ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ ကလေးယူရန် ရာသီလာတဲ့ရက်ကို သေချာသိဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက် တားဆေးများကို ကြိုဖြတ်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါ။ တစ်ချို့က ဆေးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်းကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလို တစ်ချို့ကလည်း ဆေးဖြတ်ပြီး ၁နှစ်အထိစောင့်ရတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
– အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ မိမိ ဓမ္မတာလာတဲ့ရက်ကို သေချာသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ကလေးရနိုင်ရန် အတူတူနေရမယ့်ရက်ကို တွက်နိုင်မှာပါ။ အကယ်၍ သင်ဟာ ၂၈ရက်ဝန်းကျင်မှာ ဓမ္မတာလာလျှင် သင်ရဲ့ မျိုးဥကြွေတဲ့ရက်မှာ ၁၂ရက်နဲ့ ၁၄ရက်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မှတ်ရခက်နေလျှင် နောက်တစ်ကြိမ်ဓမ္မတာလာမယ့်ပထမဆုံးရက်မှစပြီးအရှေ့ကို ၁၆ရက်နှုတ်သွားလျှင်လည်း သင်၏ မျိုးဥကြွေရက်ကို အတိအကျသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
– ဒါကြောင့် ကလေးယူဖို့ သေချာအစီအစဉ်ရှိလျှင် အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ မျိုးဥကြွေတဲ့ရက်မတိုင်ခင် ၂ရက် ၃ရက်အလိုတွင် မိမိအိမ်ထောင်ဖက်နှင့် အတူတူနေပါက သားသမီးရနိုင်ချေပိုများပါတယ်။ အမျိုးသားများ၏သုတ်ကောင်သည်မိန်းမကိုယ်ထဲတွင် ၅ရက်အထိ ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သေချာချင်လျှင် မျိုးဥမကြွေခင် ၂ရက် ၃ရက် အလိုမှစပြီး နေ့တိုင်း အတူတူနေနိုင်ပါတယ်။
– အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် မိမိအိမ်ထောင်ဖက်ကို အတူတူနေစဉ်အတွင်း ချောဆီသုံးခြင်းမှ ရှောင်ခိုင်းပါ။ အချို့သော ချောဆီများမှာ သုတ်ကောင်အရေအတွက်နည်းစေသည့်အပြင် သုတ်ကောင်များကို သေစေပါတယ်။ အကယ်၍ အသုံးပြုလိုပါက သဘာဝမှရသော ဟင်းသီးဟင်းရွက် အဆီတစ်ခုခုကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
– အမျိုးသမီးများ၏ ဓမ္မတာသည် စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းနဲ့လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုအလွန်များလျှင် ဓမ္မတာမလာတော့သည်အထိ ဆိုးကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိမိတွင် စိတ်ဖိစီးမှုများ ရှိနေပါက တတ်နိုင်သမျှ စိတ်အပန်းဖြေပါ။ တရားထိုင်ခြင်း၊ ယောဂကျင့်ခြင်း စသည်တို့ကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ၁၅မိနစ်မျှ စိတ်အပန်းဖြေပေးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး ဓမ္မတာမှန်စေပါတယ်။ ဒါလည်း ပြုလုပ်ပေးသင့်သည့်အချက်တစ်ချက်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းအချို့မှာ အသုံးဝင်နိုင်သော အချက်အလက်အချို့သာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီလိုနည်းလမ်းများနဲ့ ကြိုးစားကြည့်တာမှ သားသမီးရဖို့ခက်နေလျှင် သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနဲ့ ထပ်မံပြသဖို့ လိုအပ်ကြောင်း နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အကြံပေးပါရစေ….
ကျန်းမာ၍ သာယာပျော်ရွှင်သော မိသားစုဘဝလေးများ ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ….
အိမျထောငျတဈခုတှငျ သားသမီးရှိခွငျးသညျလညျး ပွညျ့စုံခွငျးတဈခုပါ။ သားသမီးရလှယျသော အိမျထောငျရှငျမြား ရှိသကဲ့သို့ သားသမီးရဖို့ အမြိုးသားဘကျကော အမြိုးသမီးဘကျကပါ ကွိုးစားနရေတဲ့အနအေထားလေးတှလေညျး ရှိတတျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အမြိုးသမီးမြားအတှကျ သဘာဝအတိုငျး သားသမီးရစဖေို့ နညျးလမျးကောငျးလေးမြားကို ပွောပွပေးလိုပါတယျ။ အမြိုးသမီးမြားအနဖွေငျ့ မိမိတို့၏ရာသီစကျဝနျးကို သခြောမှတျထားခွငျး၊ နညျးလမျးမှနျဖွငျ့ အမြိုးသားနှငျ့ အတူတူနခွေငျး စသညျ့နညျးလမျးမြားကို သခြောနားလညျထားပါက သားသမီးလှယျကူစှာ ရရှိနိုငျပါတယျ။
ပထမဆုံးအနဖွေငျ့ အနအေထိုငျ အစားအသောကျမှနျကနျဖို့လိုအပျပါတယျ။
– caffeineဓာတျပါဝငျသော ကျောဖီမြားကို သောကျသုံးခွငျးမှရှောငျကွဉျပါ။ တဈနကေို့ caffeineဓာတျ 500mgထကျမပိုရဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ အိမျမှာကျောဖီကို ကိုယျတိုငျ နှပျသောကျပါက ၅ခှကျထကျမပိုရပါဘူး။ ဆိုငျမှာ Latte or Americanoသောကျပါက 16ounces(၂ခှကျ)ထကျပိုမသောကျသငျ့ပါဘူး။ caffeineဓာတျသညျ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ မြားနပေါက သန်ဓမြေိုးအောငျနိုငျခွနှေုနျးကို လြော့နညျးစပေါတယျ။
– အာဟာရပွညျ့ဝသော အစားအစာမြားကို ရှေးခယျြစားသုံးပါ။ အစားအစာမြားရှေးခယျြရာတှငျ သံဓာတျ၊ ကယျလျစီယမျဓာတျ၊ ပရိုတငျးဓာတျစသညျတို့ပွညျ့ဝစှာပါဝငျသော အစားအစာမြားကို ရှေးခယျြစားသုံးသငျ့ပါတယျ။ ၎င်းငျးအာဟာရဓာတျမြားပါဝငျသော အစားအစာမြားမှာ အစိမျးရငျ့ရောငျရှိသော ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြား၊ ပဲတောငျ့ရှညျနှငျ့ ပဲအမြိုးမြိုး၊ ပနျးမုနျလာ၊ စပဈြသီးခွောကျစသညျတို့ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Omega-3 ပါဝငျသော အရိုးပါဝါးစားလို့ရတဲ့ ငါးသေးသေးလေးမြားကို စားသုံးပေးပါ။ အကယျ၍ သငျဟာ အသားမစားတဲ့သူဖွဈပါက Omega-3ကို သဈကွားသီး၊နှမျးစစေ့သညျ့ အစအေ့ဆံမြားမှရရှိနိုငျပါတယျ။ အခြိုဓာတျမြားသော အစားအစာမြား၊ ပွညျ့ဝဆီပါဝငျသော အစားအစာမြားကို စားခွငျးမှရှောငျကွဉျပါ။
– ကိုယျအလေးခြိနျထိနျးသိမျးပါ။ ကိုယျအလေးခြိနျမြားနလြှေငျ ကလေးရနိုငျခြေ နညျးနိုငျပါတယျ။
– အရကျသောကျခွငျးကို ရှောငျကွဉျပါ။ အမြိုးသမီးတဈယောကျသညျ တဈနကေို့ အရကျ ၂ခှကျထကျသောကျသုံးပါက သားသမီးရနိုငျခြေ နညျးပါးနိုငျပါတယျ။ အမြိုးသားမြားသညျလညျး အရကျအလှနျအကြှံသောကျပါက သုတျကောငျအရအေတှကျ လြော့နညျးစပေါတယျ။
– ဆေးလိပျသောကျခွငျး ရှောငျကွဉျပါ။ ဆေးလိပျသောကျခွငျးဖွငျ့ သားသမီးရရှိနိုငျမှုကိုလြော့နညျးစသေညျ့အပွငျ သားအိမျပွငျပ၌သန်ဓတေညျခွငျး၊ ကိုယျဝနျပကျြကခြွငျး၊ ပေါငျမပွညျ့ လမစသေ့ော ကလေးမှေးဖှားနိုငျခွငျး၊ မှေးရာပါရောဂါမြားပါလာနိုငျခွငျးစသညျ့ဆိုးကြိုးမြားလညျး ရရှိနိုငျပါတယျ။ သငျ၏အမြိုးသားအပါအဝငျ ပတျဝနျးကငျြအနီးအနားတှငျ ဆေးလိပျသောကျတဲ့သူမြားရှိနပေါက ဆေးလိပျဖွတျဖို့ တိုကျတှနျးပါ။ဆေးလိပျအငှရှေူ့သူမြားသညျလညျး ဆေးလိပျသောကျသုံးသူမြားကဲ့သို့ပငျ အန်တရာယျရှိပါတယျ။
– ကိုယျဝနျမဆောငျခငျအခြိနျကတညျးက အားဆေးသောကျသုံးသငျ့ပါတယျ။ သံဓာတျအားဆေးနှငျ့ ဗီတာမငျအီးကွှယျဝစှာပါဝငျသော အားဆေးမြားသညျ သားသမီးရရှိရနျ မြားစှာအထောကျအကူပွုပါတယျ။ သို့သျော မသောကျသုံးမီဆရာဝနျနှငျ့ သခြောတိုငျပငျဆှေးနှေးပွီးမှသာ သောကျသုံးသငျ့ပါတယျ။
– အိမျထောငျရှငျမြားအနဖွေငျ့ သားသမီးမယူခငျ နှဈယောကျလုံးသညျ ဆရာဝနျနှငျ့ သခြောပွသ၍ စဈဆေးမှုမြားခံယူသငျ့ပါတယျ။ နှဈဦးနှဈဖကျ မညျသူ့တှငျ ခြို့ယှငျးခကျြ ရှိမရှိကို သခြောစဈဆေးဖို့လိုအပျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျလိုအပျသော ဆေးဝါးမြားကိုလညျး ဆရာဝနျမြားက ညှနျကွားပေးပါလိမျ့မယျ။
– အိမျထောငျရှငျအမြိုးသမီးမြားသညျ ကလေးယူဖို့ အစီအစဉျရှိပါက လကျရှိသုံးစှဲနသေော သန်ဓတေားဆေးမြားကို ဖွတျထားဖို့လိုအပျပါတယျ။ သန်ဓတေားသောကျဆေး၊ ထိုးဆေးအစရှိသညျတို့သညျ သငျ့ရဲ့ ရာသီစကျဝနျးကို ပွောငျးလဲစပေါတယျ။ ကလေးယူရနျ ရာသီလာတဲ့ရကျကို သခြောသိဖို့လိုအပျတဲ့အတှကျ တားဆေးမြားကို ကွိုဖွတျထားတာ အကောငျးဆုံးပါ။ တဈခြို့က ဆေးဖွတျလိုကျတာနဲ့ ခကျြခငျြးကိုယျဝနျရနိုငျသလို တဈခြို့ကလညျး ဆေးဖွတျပွီး ၁နှဈအထိစောငျ့ရတာမြိုးလညျး ရှိတတျပါတယျ။
– အမြိုးသမီးမြားအနနေဲ့ မိမိ ဓမ်မတာလာတဲ့ရကျကို သခြောသိဖို့လိုအပျပါတယျ။ ဒါမှသာ ကလေးရနိုငျရနျ အတူတူနရေမယျ့ရကျကို တှကျနိုငျမှာပါ။ အကယျ၍ သငျဟာ ၂၈ရကျဝနျးကငျြမှာ ဓမ်မတာလာလြှငျ သငျရဲ့ မြိုးဥကွှတေဲ့ရကျမှာ ၁၂ရကျနဲ့ ၁၄ရကျဝနျးကငျြဖွဈပါလိမျ့မယျ။ မှတျရခကျနလြှေငျ နောကျတဈကွိမျဓမ်မတာလာမယျ့ပထမဆုံးရကျမှစပွီးအရှကေို့ ၁၆ရကျနှုတျသှားလြှငျလညျး သငျ၏ မြိုးဥကွှရေကျကို အတိအကသြိနိုငျပါလိမျ့မယျ။
– ဒါကွောငျ့ ကလေးယူဖို့ သခြောအစီအစဉျရှိလြှငျ အိမျထောငျရှငျ အမြိုးသမီးမြားသညျ မိမိတို့၏ မြိုးဥကွှတေဲ့ရကျမတိုငျခငျ ၂ရကျ ၃ရကျအလိုတှငျ မိမိအိမျထောငျဖကျနှငျ့ အတူတူနပေါက သားသမီးရနိုငျခပြေိုမြားပါတယျ။ အမြိုးသားမြား၏သုတျကောငျသညျမိနျးမကိုယျထဲတှငျ ၅ရကျအထိ ရှငျသနျနိုငျပါတယျ။ အကယျ၍ သခြောခငျြလြှငျ မြိုးဥမကွှခေငျ ၂ရကျ ၃ရကျ အလိုမှစပွီး နတေို့ငျး အတူတူနနေိုငျပါတယျ။
– အမြိုးသမီးမြားအနဖွေငျ့ မိမိအိမျထောငျဖကျကို အတူတူနစေဉျအတှငျး ခြောဆီသုံးခွငျးမှ ရှောငျခိုငျးပါ။ အခြို့သော ခြောဆီမြားမှာ သုတျကောငျအရအေတှကျနညျးစသေညျ့အပွငျ သုတျကောငျမြားကို သစေပေါတယျ။ အကယျ၍ အသုံးပွုလိုပါက သဘာဝမှရသော ဟငျးသီးဟငျးရှကျ အဆီတဈခုခုကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
– အမြိုးသမီးမြား၏ ဓမ်မတာသညျ စိတျဖိစီးမှုမြားခွငျးနဲ့လညျး သကျဆိုငျပါတယျ။ စိတျဖိစီးမှုအလှနျမြားလြှငျ ဓမ်မတာမလာတော့သညျအထိ ဆိုးကြိုးရှိနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ မိမိတှငျ စိတျဖိစီးမှုမြား ရှိနပေါက တတျနိုငျသမြှ စိတျအပနျးဖွပေါ။ တရားထိုငျခွငျး၊ ယောဂကငျြ့ခွငျး စသညျတို့ကိုပွုလုပျပေးနိုငျပါတယျ။ တဈနကေို့ ၁၅မိနဈမြှ စိတျအပနျးဖွပေေးခွငျးဖွငျ့ ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျပွီး ဓမ်မတာမှနျစပေါတယျ။ ဒါလညျး ပွုလုပျပေးသငျ့သညျ့အခကျြတဈခကျြပါ။
အထကျဖျောပွပါ နညျးလမျးအခြို့မှာ အသုံးဝငျနိုငျသော အခကျြအလကျအခြို့သာဖွဈပါတယျ။ အကယျ၍ ဒီလိုနညျးလမျးမြားနဲ့ ကွိုးစားကွညျ့တာမှ သားသမီးရဖို့ခကျနလြှေငျ သားဖှားမီးယပျအထူးကုဆရာဝနျကွီးမြားနဲ့ ထပျမံပွသဖို့ လိုအပျကွောငျး နောကျဆုံးအနနေဲ့ အကွံပေးပါရစေ….
ကနျြးမာ၍ သာယာပြျောရှငျသော မိသားစုဘဝလေးမြား ပိုငျဆိုငျကွပါစေ….
ကိုယျဝနျပကျြကခြွငျးမဖွဈစဖေို့ ကာကှယျနိုငျသညျ့ နညျးလမျးမြား